राजधानी कहिलेसम्म लोडसेडिङमुक्त ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
राजधानी कहिलेसम्म लोडसेडिङमुक्त ?
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गरी तिहारदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् माग तीन सय मेगावाट हाराहारी छ ।
प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा ३३ केभिबाट लाइन जडान भएका उद्योगमा तालिका अनुसार लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । लोडसेडिङको अवधि बढिरहेकाबेला नै प्राधिकरणले ०६९ को भदौमा ३३ के. भि. लाइनबाट ट्यापिङ गरी विजुली दिएको थियो । ती उद्योगमा स्वीचिङ्ग स्टेशन राखी शर्तनामासमेत गरे पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले लोडसेडिङ गर्ने गरेका थिएनन् । पूर्वाञ्चलमा सर्वसाधारणको घरमा १२ घण्टे लोडसेडिङ भए पनि कर्मचारीले उद्योगसँग मोटो रकम लिएर २४ घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्ने गरेका थिए ।
धनुषाको ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण १६ पुसभित्र सकिने/नसकिनेमा अन्योल छ । यसका कारण ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट थप विद्युत् आयात चुनौतीपूर्ण छ । सबस्टेसन बनेपछि अहिले आयात भइरहेको ८० मेगावाटसहित प्रसारण लाइनबाट २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी विद्युत् प्राधिकरणको छ । प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगमबीच क्रस बोर्डर प्रसारणलाइनमार्फत ८० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीको सम्झौता (पिपिए)को म्याद पनि पुसमै सकिँदै छ ।
ढल्केबरमा सबस्टेसन नबनेमा वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत मुजफ्फरपुर बिन्दुमा सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर राखेर ८० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिन्छ। विकल्पमा यही उपायबाट विद्युत् ल्याउने योजना प्राधिकरणको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनबाट थप बिजुली आयात गर्न नेपाल र भारतबीचको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मिलान (सिंक्रोनाइजेसन) आवश्यक पर्छ । सिंक्रोनाइजेसनका लागि अहिले दुवै मुलुकका प्राविधिकद्धारा अध्ययन भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले टनकपुरबाट ४० मेगावाटभन्दा बढी थप विद्युत् आयातको तयारी गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । टनकपुरमा अहिलेको ५० एमभिएको ट्रान्सफर्मरको सट्टा १००–१५० एमभिएका ट्रान्सफर्मर राखि थप विद्युत ल्याउन भारतसँग कुटनीतिक पहल भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।
यसको नविकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । परवानीपुर–रक्सौल र कटैया–कुशहा प्रसारण लाइनको स्तोरन्नती गरि थप ५०-५० मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।